Qaybta buug-yaraha Rain Taxi Rainbow Farshaxanka Suugaanta
Taxi Roobka waa urur suugaaneed ah oo higsanaya dhaqanka suugaanta iyadoo loo marayo barnaamijyo iyo daabacaadyo xoojinaya ka qaybgalka qoraal cusub. Gaadiidkooda ugu weyni waa kumbuyuutarka, Dib u eegista Buugaagta Taxi ee Buugaagta, oo leh dabeecado sheeko, gabayo, madadaalo, farshaxan, rikoodhyo sawir, iyo waxyaabo kale oo badan. Daabacaadu waxay ujeeddadeedu tahay in ay la xiriirto akhristayaasha buugaagta xaqa u leh oo laga yaabo in laga hortago.
Rain Taxi ayaa sidoo kale qabanqaabiya Tax Taxi Reading Series iyo Bandhiga Bandhigga ee Twin Cities. Bishii Oktoobar 2014, Rain Taxi waxay martigelisay Bandhigooda Bandhigga ee Twin Cities uguqoran. Maalintii sabtida quruxda badnayd, akhristayaasha, qorayaasha, iyo saxaafadaha ayaa lagu soo bandhigay Fairgrounds, waxaana ku dhawaad 7,000 oo kaqaybqaatay. Munaasabadda waxaa maalgaliya oo ay abaabulaan Rugta Rabshadaha iyo taageerada ka heshay Guddiga Farshaxanka Gobolka Minnesota iyo Golaha Deegaanka Metropolitan.
Katha Pollitt, Okey Ndibe, Hoa Nguyen, Matthea Harvey, Laird Hunt, Ann Hood, Stephan Eirik Clark, Julie Schumacher, iyo qaar kaloo badan. Martidaasi waxay ka wada hadleen shaqadooda shaqsi iyo wada sheekeysi kasta iyo taageerayaal, dhamaan wadahadalada waxay ahaayeen kuwo firfircoon oo firfircoon. Ka sokow martida martida ah, waxaa sidoo kale jiray 150 xafiis oo kale oo kala duwan - daabacayaasha, ururada suugaanta, iyo qorayaasha maxaliga ah iyo farshaxanayaasha waxay soo bandhigeen buugaag aad u wanaagsan, saxiixyo qoraallo, iyo bixinno maalintii oo dhan.
Carruurta Sharciga ah (oo ay wadaagaan MELSA), carruurta waxaa lagu daaweeyay waxqabadyo isdhexgalka ah Michael Dahl, Derek Anderson, Erin Soderberg, iyo qorayaasha kale ee carruurta, iyo sidoo kale xarun LEGO, ciyaar kubbadda cagta ah, sawir gacmeed, iyo muusikada by Duke Haddii kale. Xarunta dhexe ee Xarunta Dhexe, akhristayaasha da'da ah ayaa la kulmay qorayaasha Jessica Day George, SA Bodeen, Margi Preus, iyo Jacqueline West. Meesha qadada ka dib, booska ayaa isbeddelay teendhada Teenada leh Stephanie Perkins iyo Morgan Matson oo ka hadlay buugaagtooda cusub ee ku saabsan jacaylka, iyo Marie Lu iyo Andrea Cremer ay soo bandhigeen sheekooyinkooda 'YA'. Dhalinyarada Teen ayaa la xiray xaflad Teen ah, oo ay martigelisay Pete Hautman, Geoff Herbach, iyo Carrie Mesrobian, oo ay ku jiraan boorsooyin yaryar oo la siiyay 30-kii qof ee ugu horreeyay. Waxay ahayd qolka kaliya ee galabtii! Red Balloon Bookhop waxay wadaagaan Taxi Taxi si loo abuuro loona dhiso Xarunta dhexe ee Dhexe / Dhalinyaro Teen.
Ka dib markii Fairgrounds la xiray maalintii, xafladaha waxay fiidkii fiidkii ku sii socdeen akhriska Maktabada Dhexe ee Minneapolis by qoraa iyo cilmi-garaan cilmi-baaris ah Steven Pinker, kaas oo Rain Taxi la soo bandhigay saaxiibada Maktabadda Degmada Hennepin.